जातसहितका कम्युनिष्ट :अधिकांस कार्यकर्ताको घरभित्र पस्नै पाएको छैन । कि त छिँडीमा हो, कि त गोठमा, बस्नुपर्छ - edChitwan
जातसहितका कम्युनिष्ट :अधिकांस कार्यकर्ताको घरभित्र पस्नै पाएको छैन । कि त छिँडीमा हो, कि त गोठमा, बस्नुपर्छ
२० साउन, काठमाडौं । वाम विश्लेषक विश्वभक्त दुलाल अर्थात् आहुति अहिले नयाँ पार्टी निर्माणको अभियानमा छन् । पार्टीको नाम जुरिसकेको छ, र अनामनगरमा सम्पर्क कार्यालयमा पनि खुलिसकेको छ । तर, औपचारिक घोषणा गरिएको छैन ।
प्रस्तुत छ, अन्तरवार्ताको पूर्णपाठ:
जातीय प्रणालीमा खास जातीको सामन्त हुन्छ भने खास जातिबाट रैति आउँछ । नेपालको वर्ग संरचना जात व्यवस्थाबाट आधारित भयो । त्यसकारण नेपालको वर्गसंघर्षलाई बुझ्नका लागि जात व्यवस्थाको ऐतिहासिकतालाई अनदेखा गर्नु हुँदैन । माक्र्सवाद दक्षिण एसियामा असफल भएकै यसैले हो । माक्र्सवादीहरु जातको होइन वर्गको कुरा गरांै भन्थे । रुसमा यो ठीक भयो । चीनमा ठीक भयो । तर, दक्षिण एसियामा त जात व्यवस्था थियो । वर्ग–वर्गभन्दा इन्डियामा क्षेत्री–बाहुन मात्रै नेता भए । नेपालमा पनि वर्ग–वर्ग भन्दा अहिले नेकपामा के छ ? ७५ प्रतिशत क्षेत्री–बाहुन छैनन् ? हामी लडेर आएका हौं भन्छन् । अरु चाहिँ के गरेर आएका हुन् त ? शहीदहरुको संख्या गने भयो नि पार्टीमा ।
समस्या नियतमा छैन । तर्पार्इंको नियतमा दमन गर्ने भन्ने छ त ? तर तपाईंको सोच्ने तरिका गडबड हुन सक्छ नि ? त्यसकारण कम्युनिष्ट, कांग्रेसका नेताहरुको उत्पीडितलाई अझै पछि पारौं भन्ने नियत होइन । उनीहरुले जस्तो संरचना र जसरी काम गरे त्यो गलत थियो । यही कारणले सर्लक्क आउने एउटै जाति आउने हो ।
्नेताकै तहबाट पनि यस्तो भेदभावको महसुस गर्नुभएको छ ?